Raw Powder Methenolone Acetate CAS 434-05-9 Steroids ho an'ny hozatry ny hozatra miverimberina amin'ny fandefasana haingana any Brezila soa aman-tsara
Fisehoana:Vovoka kristaly fotsy na fotsy fotsy
Primobolan Depot no dikan-tsindrona amin'ny steroid methenolone.Izy io dia fitambarana mitovy amin'ilay ao amin'ny Primobolan Oral (methenolone acetate), izay samy novokarin'i Schering.Amin'ity dikan-tsindrona ity dia misy ester enanthate ampiana amin'ny steroid, izay mahatonga ny famotsorana miadana sy tsikelikely avy amin'ny tranokalan'ny tsindrona.
Ny halavan'ny asany dia mitovy amin'ny Testosterone enanthate, miaraka amin'ny haavon'ny rà sisa tavela mandritra ny tapa-bolana eo ho eo.Methenolone mihitsy dia anabolika maharitra, miaraka amin'ny fananana androgenic ambany.
Ny Methenolone Acetate dia ny dikan-tsindrona amin'ny vovobony methenolone steroid.Ny dose mahomby amin'ny Primobolan (Methenolone Acetate) amin'ny karazana tsindrona dia 200-300 mg isan-kerinandro.Raha te handray an'io fanafody io amin'ny vava ianao dia 50-150 mg isan'andro no fepetra voatondro.Ho an'ny lehilahy, 50-100 mgs / andro no fandrefesana marina sy marina amin'ny vava, raha ho an'ny vehivavy, 10-25 mgs / andro no fatra tsara indrindra.Raha tsy maintsy mitantana azy ireo ho tsindrona ianao, ny fatra ambony indrindra ho an'ny Primobolan (Methenolone Acetate) tsindrona dia 350-600 mg / herinandro ho an'ny lehilahy.Ny vehivavy dia tsy maintsy mampiasa 100 mg isan-kerinandro amin'ity fanafody ity.Primobolan (Methenolone Acetate) injectable fiainana mavitrika dia eo ho eo folo-efatra andro, raha ny fiainana mavitrika ity fanafody amin'ny endrika pilina dia eo ho eo 4-6 ora.Ny fotoana hahitana azy dia efatra-dimy herinandro.
Antony nifidianana anay
1) kalitao ambony sy vidiny mifaninana:
Ny orinasanay dia mpanamboatra pharmaceutika malaza manana traikefa mihoatra ny 15 taona any Shina ary ny vovoka rehetra dia mamatsy mivantana avy amin'ny orinasanay.
2) Fandefasana haingana, azo antoka ary tsara tarehy:
Ny ekipan'ny fonosana voaofana tsara sy voafehy ary ny tahiry ampy dia miantoka fa ny entana dia azo alefa haingana sy azo antoka amin'ny tananao amin'ny DHL, TNT, FedEx, HKEMS, UPS, sns.
3) manana traikefa amin'ny fanondranana:
Manana mpanjifa manerana izao tontolo izao izahay.Naondrana tany Alemaina, Norvezy, Polonina, Failandy, Espaina, UK, Frantsa, Rosia, Etazonia, Brezila, Meksika, Aostralia, Japon, Korea, Thailand, Indonezia, Uruguay ary firenena maro hafa ny vokatra.tahan'ny fandalovan'ny mpanjifa ≥99%
4) Fepetra fandoavam-bola miovaova:
T/T, Western Union, Money Gram, Bitcoin.Hisy foana ny teny mety aminao.
5) Serivisy mpanjifa mafana fo sy serivisy aorian'ny varotra:
Ny sarin'ilay entana sy ny laharan'ny fanaraha-maso dia halefa aminao rehefa voaomana.Ny fanontanianao dia ho voavaly haingana araka izay azo atao.
1. Ho an'ny vokatra aondrana dia afaka manolotra COA Certificate sy PI ofisialy izahay.
2. Izahay dia mpanamboatra manana laboratoara sy orinasa manokana, afaka manome vokatra avo lenta amin'ny vidin'ny orinasa.
3. Ny vokatra dia azo alefa ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fandoavana.Misy laharan'ny fanaraha-maso, olona raikitra dia 7x24h hifandraisanao.
4. Fandefasana azo antoka sy malina.Fomba fitaterana isan-karazany ho an'ny safidinao, toy ny DHL/UPS/TNT/FedEx/SF-express.
5.Mandalo ny fomba amam-panao sy ny tahan'ny fahafaham-po ≥99%.
6. Ho an'ny vokatra amidy mafana dia manana tahiry ao izahay hamindrana.
7. Ny fahadiovan'ny vokatra dia fitsapana amin'ny departemantan'ny kalitaontsika alohan'ny handefasana azy, ary azonao atao ny manontany ny fikambanana fitsapana fahatelo ho avy sy hijery, toy ny (SGS / CTI / ITS), raha tsy aorian'ny fanamafisana dia alefanay any aminao izany.
8. Manana iraka samihafa any amin'ny firenena samihafa izahay.
9. Manana mpanjifa manerana izao tontolo izao izahay.
Fivarotana milina miasa
Ny vokatra mifandraika aminay
lisitry ny vokatra:
Sustanon250 (Testosteron Mix)
4-Chlorodehydromethyltestosteron(turinabol am-bava)(CAS: 2446-23-3)
Vovoka Steroid hozatra
Oxandrolone (Anava *) (CAS: 53-39-4)
Metandienone (Danabol) (CAS: 72-63-9)
Trenbolon acetate (Revalor-H)(CAS: 10161-34-9)
Q1: Efa neken'ny Lab Antoko fahatelo ve ny kalitaon'ny vokatrao?
A: Eny, ny vokatra rehetra dia notsapaina tamin'ny alàlan'ny QC, nohamafisin'ny QA ary nankatoavin'ny laboratoara antoko fahatelo any Shina, Etazonia, Kanada, Alemana, UK, Italia, Frantsa sns. Noho izany dia ho azo antoka ny kalitao tsara raha misafidy ianao antsika.
Q2: Ahoana ny fomba fitondranao ny fitarainana momba ny kalitao?
A: Voalohany indrindra, ny departemanta QC dia hanao ny fandinihana henjana ny vokatra fanondranana amin'ny HPLC, UV, GC,
TLC sy ny sisa mba hampihenana ny olana momba ny kalitao ho akaiky aotra.Raha tena misy olana amin'ny kalitao, nateraky ny anay, dia halefanay maimaim-poana ny entana ho solonao na hamerina ny fahaverezanao.
Q3: Manaiky baiko santionany ve ianao?
A: Eny, afaka manaiky baiko kely avy amin'ny 10g, 100g ary 1kg izahay noho ny kalitao fanombanana ny entanay.
Q4: Misy fihenam-bidy ve?
A: Eny, ho an'ny be dia be, manohana foana ny vidiny tsara kokoa ho an'ny fiaraha-miasa bebe kokoa.
Q5: Manaiky ny carte de crédit orinasa VISA ve ianao?
A: Miala tsiny fa tsy mandray carte de crédit VISA izahay, fa te hanaiky ny famindrana banky, Western Union, Paypal na Bitcoin.
Q6: Hafiriana vao tonga ny entana?
Izany dia miankina amin'ny toerana misy anao,
Ho an'ny baiko kely, azafady manantena ny 5-7 andro amin'ny DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS sy ny sisa.
Ho an'ny baiko faobe, azafady avelao ny 5-8 andro amin'ny Air na 20-35 andro amin'ny ranomasina.
Q7: Manana politika famerenana ve ianao?
Mazava ho azy fa manana ny serivisy tsara aorian'ny fivarotana sy ny politikan'ny fandefasana indray isika raha very ny entana.
Nitondra tombontsoa lehibe ny fiarahanay naharitra tamin'ny mpanjifanay, mikarakara tsara hatrany ny famenoana ny vokatray izahay.Ny mpanjifanay dia hanamafy izany na dia sahirana aza izy ireo hitady azy ireo tsy misy fanampiana indraindray.
Saingy na dia eo aza ny ezaka tsara indrindra ataontsika, dia mbola azo atao ny maka fonosana vitsivitsy.Amin'ity toe-javatra ity dia mampanantena izahay fa maimaim-poana ny fandefasana mba hananganana fifandraisana maharitra amin'ny tsirairay.
Q8: Afaka mahazo santionany ve aho?
A: Mazava ho azy.Ho an'ny ankamaroan'ny vokatra dia afaka manome santionany maimaim-poana ho anao izahay hitsapana ny kalitao, raha ny saran'ny fandefasana kosa dia tokony horaisinao.
Nanangana ekipan'ny teknolojia sy mpitantana izahay izay miara-miasa akaiky amin'ny Labs any ampitan-dranomasina izay samy miresaka tsara momba ny fandefasana entana sy entana azo antoka.
aza misalasala mifandray aminay.
teo aloha: Anabolics Drostanolone Propionate Cas 521-12-0 Raw Steroid Powder Masteron p miaraka amin'ny Safe Deliver Paypal ekena
Manaraka: Ny tena hozatra mahazo Primobolan A steroïde hormonina zava-mahadomelina Methenolone Acetate CAS 434-05-9 miaraka amin'ny fandefasana an-trano
Primobolan A Powder
99% Anabolic Steroid Raw Powder Methenolone Ena ...
Steroids mpanorina hozatra Primobolan E Methenolon...